Ndị na-ebugharị wiilị ụkwụ, ndị na-ebu ibu na-aga n'ihu, Compact Wheel Loaders - Jufenglong
bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke ndị na-ebu ihe na gwongworo igwekota nri onwe ha.
LEHMAN arọ loader usoro ngwaahịa, ma anụ ụlọ na mba kacha mma kenha ngwa, a pụrụ ịdabere na àgwà, osobo humanization chọrọ ， ọ mepụtara ọfịs na ihe karịrị 10 mba gburugburu ụwa, na ya na ngwaahịa na-exported karịa mba 20 na mpaghara dị ka India , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia na Brazil.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike zuru oke, na-ejikọ nyocha na mmepe ngwaahịa, mmepụta, ire ahịa na ọrụ, ma na-ebute ụzọ n'inweta mmepụta akụrụngwa pụrụ iche na ikikere n'ichepụta akwụkwọ site na eu CE certificatin, ISO9001 internatinal quality system certification
Self loading igwekota ụgbọala
Ngwaahịa a nwere ike dochie igwe jenerato, ndị na-ebu ibu, ndị na-agwakọta ya na ndị na-ebu mmiri. Nakwa ihe karịrị ndị ọrụ isii, bụ ọgbọ ọhụụ nke ụlọ ọrụ ụlọ na-eduga ngwaahịa.The tank nwere ike ịtụgharị na ogo 270 na enweghị isi nwụrụ anwụ n'akụkụ atọ.
Ume ume etiti, na etiti nke ike ndọda nkesa ezi uche, ike ebu ikike.
na-ebupụ ngwaahịa karịa mba 20 na mpaghara dị ka India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia na Brazil.
Mgbado ọkụ robot
Robot akụrụngwa ịgbado ọkụ akụrụngwa iji hụ na ịdị mma nke ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ nke ọma, ịgbado ọkụ siri ike.
Laser ịgbado ọkụ
ụlọ ọrụ ahụ webatara German n'ụzọ zuru ezu Automatic Laser Cutting na blanking akụrụngwa na German CNC ịgbado ọkụ robot akụrụngwa.
ruru eru stof
A Self Loading Concrete mixers na cann ...
26 Nọvemba, 20
A Self Loading Concrete Mixers nke na-enweghị ike ịjụ N'afọ ndị na-adịbeghị anya nke ịrụ ọrụ injinia, ndị na-ahụ maka ihe ndị na-eme onwe ha na-arịwanye elu. Ma na obodo, obodo, ma obu na ...
You maara ndụmọdụ isii iji bụrụ ezigbo ...
Ezigbo onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ihu igwe nwere ike ịma nke ọma otu esi eji igwe mgbe ị na-ebu ihe na-ebu ihe, belata akwa ejiji, belata oriri mmanụ, ma mezue ọrụ ahụ ngwa ngwa na nke ọma. Ihe na-esote ...
Nwere mmasị na LENMAN?
E nwere ihe karịrị 80 n'etiti na agadi oru pesonel na njem, ihe karịrị 700 ndị ọrụ, na ike na nkà mmụta sayensị otu egwuregwu mbo ihu na ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe, karịsịa ogologo oge imekọ ihe ọnụ wth mahadum clleges na universitieThus, a elu-edu enterprise otu e wuru.
Rụọ ọrụ US
Nweta akwụkwọ edemede
Innovation na-agbanwe okwu ahụ, mma na-emepụta ọdịnihu! Shan Yi ígwè ọrụ LTD, emi odude ke Laizhou, Shandong n'ógbè, e hiwere na 1990s S. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 4000 sqm na nwere a modem mmepụta omumuihe nke 20000 sqm na ngụkọta ego nke 200000000 yuan, ọ bụ ihe enterprise ọkachamara na mmepụta nke ndị na-ebu ihe na gwongworo na-eri nri. Ọ na - arụpụta 50000 loaders na 8000 na - enye onwe ha nri gwakọtara gwongworo
Onwe-Loading igwekota gwongworo, Cement igwekota agbapụtara Concrete, 2021d Wheel Ibu Ibu, Kọmpat Wheel Loaders, Ulo Okpu N'uba N'uba, Bell Ibu Ibu,